Maxay ku timid qisada filimka QAB IYO IIL ee uu jilay wariye Cawke? - Jigjigaonline
HomeSomalidaMaxay ku timid qisada filimka QAB IYO IIL ee uu jilay wariye Cawke?
Waxaa dhawaan la baahiyay filim magaciisa loo bixiyay QAB IYO IIL oo xambarsanaa fariin wayn oo bulshada Soomaalida lagaga wacyi galinayo dagaalada ku salaysan qabiilka oo inta badan ka dhaca deegaanada ay Soomaalidu dagto kuwaas oo sababa dhimasho iyo barakac.
Filimkan waxa lagu duubay deegaanka Xeedho oo waqooyiga kaga beegan magaalada Hargeysa, waxaa ka qayb qaatay 62 qof oo jilayay qaybaha kala duwan ee uu ka koobnaa filimkan.
Jilaaga ugu muhiimsan filimka waa wariyihii BBC-da Axmed Xasan Cawke ee geeriyooda.
Qisada filmkan maxay ku timid?
Axmed Faarax waa filim sameeye Soomaaliyeed oo ah maskaxda ka danbaysay soo saarista QAB IYO IIL wuxuu BBC-da uga waramay sida ay ku timid qisadan,
”Qisadan waxay igu dhacday sannadkii 2008 aniga oo tuulo Soomaaliyeed ka tagay oo mid kale u socda ayaa lay waydiiyay qabiilkayga cidda aan ahay, waanan isku qalqalay waan garan waayay markii danbe ayaan ku iri ninkii ila socday haddii aan ku adkaysto Soomaalinimada maxa dhacaya kadib sheeko ayaan ka qoray oo aan sidaas ku sameeyey sheekada QAB IYO IIL.”
Filimkan waxaa jilaaga koowaad ka ahaa illaahay ka u naxariisto Axmed Xasan Cawke oo ahaa saxafi xushmad wayn ku dhex lahaa bulshada Soomaalida mudo badana u soo shaqeeyey BBC-da. Cawke oo aan looga baran filim jilista ayuu Axmed Faarax oo ka hadlaya sida uu ugu soo biiray ka qayb galka jilayaasha filimkan yiri.
”Maadaama aan Cawke saaxiibo ahayn ilaa 2012 meesha aan rabay in aan filimka ku sameeyana ay ahayd Hargaysa isaguna uu ahaa qof siwayn loo qadariyo waxaan ula tagay in uu iga caawiyo deegaanka aan wax ku duubayay dhanka dowlada in uu noqdo qofka aan wajigiisa ku socdo kadib wuxuu i waydiiyay sheekadu waxay ay tahay markaas ayaan ku iri maad adigu matashid odayga filmka wuxu igu yiri diyaar baan ahay maanan ka filayn farxad ayay ii ahayd.”
Axmed Faarax soosaaraha filimka QAB IYO IIL
Filimkan wuxuu ku saabsanaa deegaano ay barakicinayaan dagaalo sokeeye oo ku salaysan qabiilka mowduuca uu filimku ku dhamaanayo ayaa ahaa fariin uu dhiibay Cawke kadib markii maleeshiyaad beelo ah ay qabteen isaga iyo wiilkii yaraa ee uu awowga u ahaa waxa la waydiiyay qabiilka uu yahay isaguna wuxu ku jawaabay, ”Cidayda miyaad doonaysaa Soomaali baan ahay aniga miyaad leedahay waan ku dilayaa waxan ku waydiiyay haddaad i disho inta aad i raacdo miyaad i cadaabi oo ma dilbaa kaasi mar uun ayaan dhiman lahaa” sidaas waxa yiri illaahay ha u naxariistee Cawke filmka dhamaadkiisa.
Deegaano badan oo Soomaalidu dagto waxa ka dhaca dagaalo ay sababaan khilaaf ku salaysan dhul balaarsi iyo looltanka awoodaha qabiilka.